Dhiragi maTatoo uye zvazvinoreva | Kunyora
Matatoo emakava, anotungamira erombo uye kubereka
Antonio Fdez | | Kufungidzira Tattoos
Aya madhimoni engano dzekumabvazuva anga aripo kubva panguva dzekare mungano dzakawanda uye nyaya dzichiripo nanhasi. Uye ndezvekuti hapana mashoma mafirimu eHollywood akave akaoneswa pachiratidziro chikuru uye mune izvo zvikara zvinobhururuka zvaigona kuonekwa. Madragoni agara ari zvisikwa zvakaremerwa nemucherechedzo wakadzika uye nhoroondo.kunyanya muAsia.
Ndicho chikonzero nei shato nyora zvinoratidzira zvese izvo zvinomiririra uye nhoroondo. Zvichienderana nenzvimbo yatiri yepasi, zviratidzo zvinomiririrwa nezvinokambaira zvinobhururuka zvine mazino akakura uye zvinokwanisa kupfira moto zvinosiyana zvakanyanya. Panyaya yemakava ekumabvazuva, mungano dzakasiyana dzatinogona kuverenga mumabhuku ekare tinozviona makava anounza hupfumi nekubereka.
Naizvozvo, matatoo eshato anogona kuonwa senzira yekuratidza uye / kana kutarisira yakanaka mashura. Zvakapesana chaizvo nemaDragons kuMadokero. Uye ndezvekuti kudivi repasi, nyaya dzinogara dzichitaura nezve mhuka dzesango, dzine njodzi uye dzisina kunyorwa. Vanoparadza hupenyu, mhuri nedzimba.
Nezve iyo dhiragoni dhizaini dhizaini, tinogona kuvawana vakamiririrwa nenzira dzakawanda. Kunyangwe izvi, ivo vanogara vachiwanzomiririrwa nenzira imwechete iyo yavakakweverwa neChina neJapan tsika. Nezve iyo nzvimbo pamuviri apo shato nyora dziri naniZvakanaka, chokwadi ndechekuti zvinoenderana nedhizaiti yacho pachayo. Kunyangwe zvakajairika kuve kuzviwana pachipfuva kana maoko achiitenderedza.
Tinogona zvakare kuwana dhiragoni yakaita madzinzakunyanya kubva panguva iyo matattoo emadzinza ainyanyo kufarirwa. Kunyangwe nhasi vanhu vashoma uye vashoma vachisarudza iyi mhando yekugadzira. Ini pachangu ndaizoigadzira imwe muchimiro chechokwadi uye ndichishandisa grey uye machena akajeka.
Mifananidzo yeDragoni Tattoos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Matatoo emakava, anotungamira erombo uye kubereka
Zita diki nyora
Zita mazita mumatato